समाज Archives - खबरदार न्युज
Sep102021 by AdministerNo Comments
Posted in Breaking News, समाचार, समाज
कास्की, पोखरा क्षेत्रमा हिजोआज (सापु) को संक्रमण देखा परेको छ । हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका नेत्र रोग बिषशेज्ञ डा. इन्द्र महर्जनका अनुसार विगत दुई साता देखि पोखरा क्षेत्रमा सेतो पुतलीको शंक्रमण देखा परेको बताए । आँखामा सेतो पुतलीको झुस बिजेर रातो र सुनिएका करिब २० जना बिरामीहरु हिमालय आखाँ अस्पतालमा उपचार गर्न आएको नेत्र विशेषज्ञ डा. महर्जनले जनाए ।आखाँ रातो र सुनिएको अबस्थामा जति सक्दो छिटो आँखा अस्पतालमा गएर उपचार गर्दा निको हुने उनले जनाए । आखाँमा पिप परेको अबस्थामा आखाँमा सुई लगाउने र आखाँको अप्रेसन गर्ने दुई ढंगबाट उपचार गर्न सकिने भएको डा. महर्जनले जनाए । प्रायः गरी भदौं र असोज महिनामा देखापर्ने सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु आँखामा पर्न गएमा समयमै उपचार हुन नसके आँखाको ज्योति नै गुम्न सक्ने डा.महर्जनले चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो दुई हप्तामा सेतो पुतलीको झुसका कर्णहरु बिजेका कार
Jun162021 by AdministerNo Comments
काठमाडौं, हिजो अपरान्हदेखि परेको अविरल वर्षासँगै भिषण बाढीको चपेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदिको तटीय क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । घटनास्थलको हवाई अवलोकन गरेर फर्केका स्थानीय पत्रकार रामचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म नौ जनाको श'व भेटिएको छ भने हेलम्बुदेखि दोलालघाटसम्मका ३०० भन्दा बढि घरहरु डुबानमा परेका छन् । सबैभन्दा बढि क्षति मेलम्ची बजारमा भएपनि हेलम्बु, चनौटे, तिउल, ग्याल्थुङ, तारामाराङ, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, सिपाघाट, दोलालघाट सम्मका नदि किनारामा क्षेत्रका घर, खेत, बारीहरु नष्ट गरेको जनाएको छ । आजै विहान घ'ट'नास्थलको अवलोकन गर्न पुगेको सो क्षेत्रका निवर्तमान सांसद मोहन बस्नेतलाई स्थानीयबासीले ५५ जना अझै बेपत्ता भएको जानकारी गराएका हुन् । सो क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ९ जनाको शव भेटिएको जानकारी स्थलगत अवलोकन गरेर फर्केर आएको टोलीले बीमा पोष्
Jun22021 by AdministerNo Comments
काठमाडौं, जेठ १९ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू जेठ २१ गतेपछि निषेधाज्ञामा खुकुलो गर्ने तयारीमा पुगेका छन् । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णयमा पुगेको हो भने अबको निषेधाज्ञा पछिल्लो निषेधाज्ञाभन्दा खुकुलो हुने बताइएको छ । एक साताको कडा निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल गरेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । उनले भने ‘अहिलेसम्म गरिएको निषेधाज्ञा केही सुधारोन्मुख भएको छ । अहिले सं'क्रमणदर घट्दै गएको छ भने अस्पतालहरूमा सं'क्रमि'तका लागि उपचार गर्न बेड तथा अक्सिजनको अभाव हटेको छ । आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारेमा थप छलफल भएको छ ।’बैठकले गरेको निर्णय गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग छलफल गरे पनि सार्वजनिक जानकारीको लागि प्र
May312021 by AdministerNo Comments
काठमाडौ: नेपाल चिकित्सक संघले चर्चित कमेडियन आदर्श मिश्राालाई का रवाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ । चिकित्सकसंघले शनिवार विज्ञप्ती जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेको हो । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज NMC र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालको ला परवाहीका कारण आफ्ना बुवाको नि धन भएको भन्दै चर्चित कमेडियन आदर्श मिश्रााले केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । चिकित्सकको लापरवाही भएको आ रोप लगाएर सामाजिक सजालमा पोष्ट गरेको भन्दै संघले का रवाहीको माग गरेको हो । आफ्नो बुवाको निधन भएको भोलीपल्ट मिश्रााले उपचारका क्रममा आफुले पाएको समस्याका बारेमा भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । उनले भनेका थिए कि, त्यहाँका नर्सले डाक्टरका अगाडि डायलासिस मेसिन ४ घण्टाका लागि सेट गर्ने तर डाक्टर हिँड्ने बित्तिकै ३ घण्टामा झार्ने सम्म पनि गरे । उनीहरूलाई घर जान हतार थियो होला तर उनीहरूका
Jan92021 by AdministerNo Comments
अछाम। २५ पौष,पहाडबाट आय आर्जन र अवसरको खोजीमा भारत पस्ने र लाहुरे बन्ने परम्परासँगै विदेसिन थालेको नेपाली समाज पछिल्लो समय प्रगति र उन्नतीका लागि अवसर खोज्दै विदेशिने क्रम बढ्दो छ। तर रहर र बाध्यता बिच विदेसिएको प्रवासी जीवन सोचेजस्तो सहज र खोजेजस्तो खास छैन। प्रवासी जीवन घडीको सुइसँगै दौडिन्छ। अर्लाम र घडीको सुइसँगै चल्न नसक्दा धेरैले प्रवासलाई सरापेका छन्। विश्वका बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुक अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतमा त झन समयको महत्व बेग्लै हुन्छ आय आर्जनका लागि स्वप्नलोक मानिने अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा बस्ने नेपालीको जीवनशैली अपवादबाहेक घडीको सुइभन्दा कम छैन। स्रोतमा प्रचुरता र अलौकिक भुगोल अनि भौतिक विकासले अस्ट्रेलिया सबैको आँखाको तारो बन्दै गएको छ। विविध भौतिक सुख सुविधा भए पनि प्रवासमा साधारण जीवनशैली सहज छैन। समुन्द्र किनारमा खिचेका सुन्दर तस्वीर अनि गगनचुम्बी भवन मुनी कलेजी ओठलाई
Sep82020 by AdministerNo Comments
हेटौंडाका राजु अधिकारीले दुई वर्षअघि एउटा ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ बस किने । नारायणगढबाट वीरगञ्जको रुट लिएर आफैं चलाउन थाले । चालकबाट ‘साहु’ भएका उनले बस किन्दा लिएको ऋण तिरिसकेका छैनन् । तर, अहिले उनलाई ऋण तिर्न मात्रै हैन, आफ्नै दैनिक खर्च धान्न नै समस्या परेको छ । लकडाउनपछि गाउँ गएर बसे पनि उनको मन हेटौंडाको सडक किनारमै पार्क गरेर छाडिएको बसतिर छ । कहिलेकाँही हेटौंडा झरेर बस नियाल्छन् र गाउँ फर्किन्छन् । राजुलाई राख्दाराख्दै थोत्रो बस कामै नलाग्ने गरी बिग्रने चिन्ता छ । बेखर्ची भएका उनलाई गाउँ बस्न पनि अब सकस भइसक्यो । हेटौंडामा कोठाको भाडा महिनैपिच्छे तिर्नुपरेको छ, एक रुपैयाँ कमाइको बाटो नभएपछि उनी अब कसरी गुजारा चलाउने भनेर समस्या पनि छ । ‘खेतबारी प्रशस्तै भए पनि गतिलोसँग खेतिपाती नै गर्थेँ, २/४ रोपनी बारीमा मकै रोपेर गाडी किन्दा लिएको ऋण तिर्न पनि सकिन्न,’ उनी भन्छन्, ‘५ महिनादेखि गाडी थ
१६ भदौ काठमाडौं । एकताको डेढ वर्षमा विभाजित बनेका साझा र विवेकशील पार्टी विभाजनको डेढ वर्षपछि फेरि एकता प्रयासमा फर्केका छन् । यसपालिको एकता प्रक्रिया पहिलेभन्दा मजबुत र फराकिलो हुने नेताहरुको दाबी छ । विभाजनपछि हण्डर र ठक्कर खाएका दुवै दलले गत असारदेखि एकता वार्ता सुरु गरेका थिए । दुबैले महिला नेतृत्वमा संवाद समिति गठन गरेर वार्ता अगाडि बढाएका छन् । विवेकशीलको संवाद समिति रञ्जु दर्शनाको नेतृत्वमा छ भने साझाको नेतृत्व समीक्षा बास्कोटाले गरेकी छन् । उनीहरु दुवै वार्ता प्रक्रिया सकारात्मक र निस्कर्षउन्मुख रहेको बताउँछन् । ‘हामीले विगतको विभाजनको समीक्षा गरेर आत्मालोचनासहित एकता प्रक्रिया थालेका हौं,’ विवेकशील नेतृ रञ्जुले भनिन्, ‘अबको एकता फराकिलो दायरामा हुनेछ र पुराना गल्तीहरु दोहोरिने छैनन् ।’ समीक्षाले पनि यही भाव व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘वैकल्पिक शक्ति एक हुनैपर्छ भन्ने निस्कर्षका सा
आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले एप्पलको नयाँ संस्करण आइफोन १२ को व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । आगामी सेप्टेम्बर १० मा एप्पलले आइफोन १२ सिरिज लञ्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । आइफोन १२ को लुक्स तथा डिजाइनदेखि क्यामरालगायतका विभिन्न फिचर्सका बारेमा केही समय यता सञ्चार माध्यमहरुले अनेक खुलासा गरिरहेका छन् । केही समयअघि सार्वजनिक भएको एउटा समाचारमा आइफोन १२ को संस्करणमा ६४ मेगापिकृसेलको प्राइमरी क्यामरा रहने दाबी गरिएको थियो । तर उक्त दाबीलाई खण्डन गर्दै पछिल्लोपटक एक नयाँ समाचार आएको छ जसले आसन्न आइफोनको धमाकेदार क्यामराको प्रतिक्षा गरिरहेका एप्पल फ्यानहरुलाई झट्का दिनसक्छ । त्यो के भने आइफोन १२ मा ६४ मेगापिक्सेलको नभई १२ मेगापिक्सेलको प्राइमरी क्यामरा सेन्सर हुनेछ । सबै मोडेलमा १२ मेगापिक्सेल क्यामरा रिपोर्ट अनुसार आइफोन १२ सिरिजका सबै मोडेलहरुमा १२ मेगापिक्सेलकै मुख्य क्यामरा सेन्सर रहनेछ । रिपोर
९ भदौ, काठमाडौं । ओमानको राजधानी मस्कटमा आवासीय दूतावास भवन बनाउनका लागि नेपालले जग्गा लिजमा लिएको छ । २० वर्षका लागि खरिद गरिएको जग्गाको मूल्य नेपालले प्रतिवर्ष ६ लाख ३७ हजार ७३५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । जग्गा खरीद सम्बन्धी सम्झौतामा मंगलबार ओमानस्थित नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले हस्ताक्षर गरेकी छिन् । ओमान सरकारका तर्फबाट त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद विन नासिर विन मोहम्मद अल वहेबीले हस्ताक्षर गरे ।नेपाली दूतावास भएका देशहरूमा आफ्नै भवन बनाउने नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम मस्कटमा दूतावासको आफ्नै भवन बनाउनका लागि जग्गा प्राप्तिको पहिलो काम सम्पन्न भएको राजदूत ढकालले अनलाइनखबरलाई बताइन् । यो सम्झौतासँगै समग्र खाडी क्षेत्रमा आफ्नै भवन हुने पहिलो नेपाली दूतावास हुने दिशामा नेपाली दूतावास ओमान अघि बढ्ने ढकालको दाबी छ । आफ्नै भवन हुँदा दूतावासको बर्षेनी घर भाडामा हुने खर्चमा व्य
१४ भदौ, काठमाडौं । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार सरकारलाई दुई पन्ना लामो पत्र पठाएर भनेको छ, ‘नियमित फ्लाइटलाई प्रतिस्पर्धी नबनाए यात्रु -‘घर फर्किने नेपालीहरुले मँहगो मूल्यमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।’ पत्रमा नियमित उडानका लागि मलेसियाबाट एकतर्फी उडानको भाडा ८७ हजार (२९ सय रिंगेट)भन्दा बढीसम्म उठाउन सुरु भएको जानकारी पनि दिइएको थियो । स्रोतका अनुसार दूताबासको पत्रमा नियमित उडानमा मलेसियाबाट यात्रु लैजान कुन एयरलाइन्सले कति भाडा उठाउँदैछन् भन्ने विस्तृत विवरण पनि थियो । कसैले २२ सय रिंगेट, कसैले २५ सय रिंगेट त कसैले २९ सय रिंगेटसम्म भाडा असुल्न लागेको जानकारीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पत्रको बोधार्थ पर्यटन र श्रम मन्त्रालयका साथै कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी), नेपाल एयरलाइन्सलाई पनि छ । जब कि मलेसियाबाट सरकारले चार्टर्ड उडानमा यात्रुलाई (४७ हजार)